ရွှေFM (၁၁)နှစ်ပြည့်အတွက် အထူးအစီအစဉ် | Shwe FM
ရွှေFM (၁၁)နှစ်ပြည့်အတွက် အထူးအစီအစဉ်
ရွှေFM (၁၁) နှစ်ပြည့်အတွက် အထူးအစီအစဉ်ကောင်းများစွာနဲ့ တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုကိုတော့ ရွှေFMရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ လာမယ့် (၁၀.၁၀.၂၀၂၀) ရက်နေ့ ညနေ၂နာရီက ၅နာရီအထိ ရွှေလေလှိုင်းကနေတဆင့် နားဆင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေတို့ကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆက်ပြီးပါဝင်လို့ရမယ့် အထူးအစီအစဉ်တွေလည်းရှိနေတယ်နော်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ညနေ ၂နာရီခွဲမှာ စတင်ဖုန်းဆက်လို့ရမယ့် ”ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အသံသရုပ်ဆောင် အစီအစဉ်”
ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ ရွှေပရိသတ်များက တင်ဆက်သူများနဲ့အတူ အသံသရုပ်ဆောင်ပြရမှာပါ။ ဖုန်းဆက်လာတဲ့ပရိသတ်များကို ရွေးချယ်စရာ နံပတ်၁၀ခုပေးထားမှာဖြစ်ပြီး မိမိရွေးလိုက်တဲ့နံပတ်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံလေးကို အသံသရုပ်ဆောင်ပြရမှာဆိုတော့ ရင်ခုန်စရာကြီးနော်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ”ရွှေရင်တွင်းကဗျာ”အစီအစဉ် ကဗျာအစီအစဉ်မှာပါဝင်မယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ ရွှေFMရဲ့ ၁၁နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်သွားအောင် ရွှေFMနဲ့ပတ်သက်လို့ ရွှေတို့ရဲ့ ရင်တွင်းကစကားလုံးလေးတွေကို ကဗျာရေးသားပြီး ဖုန်းဆက်ရွတ်ဆိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ”ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အသံသရုပ်ဆောင်အစီအစဉ်”နဲ့ “ရွှေရင်တွင်းကဗျာ”အစီအစဉ်မှာပါဝင်လာမယ့် ရွှေပရိသတ်တွေကိုလည်း ရွှေရဲ့၁၁နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ လက်ဆောင်များပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ ကျန်ပါသေးတယ်နော်။ 4:00PM မှာတော့ တေးသံရှင် ‘မူးလာ’ကို ရွှေပရိသတ်တွေ ဖုန်းဆက်ပြီးတိုက်ရိုက်စကားပြောလို့ရမယ့် “ရွှေကြယ်ပွင့်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း”အစီအစဉ်အပြင် 4:30PM မှာတော့ “Unplugged Live”အနေနဲ့ တေးသံရှင် ‘ပိုးမီ’နဲ့ တေးသံရှင် ‘မေမဒီ’တို့ရဲ့ တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေသီဆိုမှုကိုပါ တဝကြီးနားဆင်ရဦးမှာဆိုတော့ ဘာလိုသေးလဲပေါ့နော်။
ဖုန်းဆက်ပါဝင်ရမယ့် အစီအစဉ်များကိုတော့ ဖုန်းနံပတ် ၀၁၅၃၆၁၂၉ ကိုခေါ်ယူပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ကဲ !!! ၁၀ရက်နေ့ ရွှေFMကနေ Liveစတင် တင်ဆက်မယ့် ညနေ၂နာရီကနေ ညနေ၅နာရီအထိ ရွှေတို့အားလုံး အတူတူရှိနေကြဖို့အတွက် သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
ShweFM 11th Anniversary Music Award2020
ပုံစံပြောင်းပြီး ဈေးရောင်းနေရသည့် ပျံကျဈေးသည်များ
အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာစွာဖြင့် နေပြည်တော် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးသို့တက်ရောက်လျက်ရှိ
© Copyright 2020 by Shwe FM Radio. All Rights Reserved.